Kala Abla-ablaynta Dhagaxa |
Kala abla ablaynta dhagaxa ayaa lookala saadhaa dhawr qaybood waxaana ka mida:-
Dhagax madaw “igneous”, af carabigana lagu dhaho (Naari):-Dhagax madawga ayaa ka samaysma magmaha milmay. Waxaana kamid ah dhagax dhadhaabeedka siiba dhagax dhadhaabeedka adag oo waxlagu dhisto. Kaas oo asalkiisa ka yimaada dhagaxa looyaqaan magma. Dhagaxaan dhagax madawga ah ayaa ka kooban macaadinta “primary minerals”, silikayt ogsaydhka, biriqda iwm. Kuwaas oo ah kuwo aad ukala duwan haba ugu weynaato midabkooda, qayb waa madaw, kuwo kalena waa cadaan
Dhagaxa ka hooseeya biyaha “sedimentary rocks”, (Mutaxawal):-Waa qayb kale oo ka mida dhagaxa kana hoosaysa dhulka hoostiisa, waxaana laga soodaayaa walxo kale. Waana dhagax duq ah kuwaas oo ay soo uruuriyeen biyuhu. Ugu danbayntiina ay ka dhalatay in uu samaysmo dhagax dixeed cusub. Tusaale ahaan, silikayt ogsaydh ku jirta ciidda ayaa ka mida taas oo ay cimiladu burburisay qaab falgal kiimikaad. Waxaana laga soodhiraan dhiriyay dhagax dhadhaabeedka. Waxaana lagu kaydiyaa oo laga helaa xeebaha oo kale, kadibna waxa uu noqdaa shiminto. Taas oo ka samaysan kaalshiyaam kaarboonayt iyo aayroon oo laga helo biyaha dhexdiisa. Waxayna isku baddellaan dhagax adke ah oo culus looyaqaan dhagax ciideed. Sidaa si lamida ayaa dhoobada marka laysku cadaadiyo, waxa ay noqotaa sheel, oo iyana kamida dhagaxda hoose ee biyaha.
Metamorfika “metamorphic rocks”, (Rusuubi):- Waa dhagax ka samaysma dhagax madawga iyo dhagax dixeedka. Habkaan ayaa kulug leh cimilada oo saamayn weyn ku leh. Sidaa daraadeed dhagax madowga iyo dhagax dixeedka ayaa ah dhagax aad ugu wanaagsan dhisitaanka waana dhagaxuun aan cayaar loo burburinkarin. Kulaylka iyo cadaadiska ayaa waxaa ka dhasha isku dhacyo qurub yada ayaa burbura. Sababtana waxa weeye dhaq dhaqaaqu samaynaayo dhul gariirku iyo isbeddelka cimiladda oo saamayn weyn ku leh samaysmidka carradda. Waxaa jira awood aad usaraysa taas oo isku haysa qurubyada uu ka samaysan yahay dhagaxu asalkooduna ka yimaado macaadinta.
Asalka dhagaxa iyo macdantu ayaa burbura muuqaal ahaan iyo kiimikal ahaan. Muuqaal ahaan ayaa dhagaxa waxaa ku dhaca bur bur lixaad leh iyadoo loo kala jabinaayo qurubyo aad uyar. Ugu danbayntiina waxa ay isu badashaa ciid iyo tamuux, ku waas oo milma iyo walxo samaysma. Sidaa si lamida ayaa macaadinta uu dhagaxu ka sameysan yahay ayaa waxaa ku dhaca falgal kiimikaad iyadoo loo kala jabinaayo curiyayaal abyan iyo togan. Waxaana la siidayn karaa inyar ama inbadan oo neef ah ayaa hawada gala. Waana siisocdaa milankaa ilaa lagagaarayo in uu noqdo curiyayaal aan isku dhisyo ahayn. Inta lagu guda jiro falgalkaa kiimi kaad, waxa isbeddela cabirka dhagaxa, waana siiyaraanaya xiliba xiliga kadanbeeya, ilaa uu ka mid noqdo milanka. Macaadintaan marka ay ku dhex milmaan biyaha ayaa lagu sameeyaa hoos udaadijid ama “leeching” ilaa ay gaarto carrada qaybaheeda. Kadibna waxaa loobadalaa kuwo la adeegsan karo ilaa ay dhirtu ka qaadato.
Macaadinta ayaa loo qaybiyaa saddex farac oo muhiim ah waxayna kala yihiin:-
A). silikayt kalaay
B). aayroon iyo aluminiyaam ogsaydh
C). silikayt ogsaydh.
Tags: Kala Abla-ablaynta Dhagaxa
Next post Isbeddelka Ay Keento Cimilada
Previous post Maxaa Sababay in Soomaalida Ay Bartaan Cunidda Hilibka Digaagga?